Izindaba - I-Covid-19 Isilethe Umthelela Omkhulu Nokuhlolwa Kwimboni Yezokuhweba Emhlabeni Wonke
ICovid-19 Ilethe Umthelela Omkhulu Nokuhlolwa Emkhakheni Wokuthengisa Womhlaba Wonke
Engxenyeni yokuqala yonyaka we-2020, ukuqubuka okungazelelwe kwe-coVID-19 kubeka imboni yezentengiselwano emhlabeni wonke, kufaka phakathi imboni yezingubo, emthelela omkhulu nasekuvivinyweni. Ngaphansi kobuholi obuqinile beKomidi Elikhulu le-CPC, isimo sokunqanda nokulawula ubhadane eChina siqhubeke nokuba ngcono, ukukhiqizwa nokuhleleka kwempilo kubuyiselwe ngesivinini esisheshayo, imakethe yabathengi iqhubeke nokuvuseleleka, futhi abathengi kancane kancane kwandise ukuzimisela kwabo nokuzethemba ekusebenziseni imali. Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni ngo-2020, ukuthengiswa okuthengiswayo kwezimpahla zabathengi kwe-China kufinyelele ku-17.23 trillion yuan, kwehle ngo-11.4% ngonyaka nangamaphesenti angu-7.6 amaphuzu angaphansi kwalelo ngekota yokuqala. Phakathi kwabo, ukuthengiswa kwempahla kwaqhubeka ngokuqinile. NgoJuni, ukuthengisa okuthengiswayo kubuyiselwe ku-3 trillion yuan ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Ukululama kwasheshiswa, imakethe yabathengi yaqhubeka nokukhuphuka, futhi abathengi bazimisela futhi bazethemba ukusebenzisa imali. Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni ngo-2020, ukuthengiswa kwezimpahla zabathengi baseChina kufinyelele ku-17.23 trillion yuan, kwehle ngo-11.4% ngonyaka nangamaphesenti angu-7.6 amaphuzu angaphansi kwalelo ngekota yokuqala. Phakathi kwabo, ukuthengiswa kwempahla kwaqhubeka ngokuqinile. NgoJuni, ukuthengisa okuthengiswayo kubuyiselwe ku-3 trillion yuan ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Ngenxa yesimo samanje esiyinkimbinkimbi, izingubo zisabalulekile empilweni yansuku zonke. Sihlale siphikelela ekwakheni izingubo zemidlalo zangaphandle ezikhululekile. Ngokungafani nezingubo zabantu abadala, abathengi bazobheka izinto ezinjengokunethezeka, ikhwalithi, uphawu, nokugcwaliswa lapho bethenga izingubo zezingane, hhayi nje “ukubukeka okuhle”. Lokhu kungenxa yokuthi izingane zisesigabeni sokukhula futhi zinezidingo eziphakeme zezingubo ezisondelene, okufanele ziqinisekise induduzo ngaphandle kokulimaza impilo.
Inkampani yethu iyinkampani yezohwebo yakwelinye izwe enezingubo zabantu abadala ezingajwayelekile nezingubo zezingane njengemikhiqizo ehamba phambili, izindwangu ezingenamanzi neziphefumula kalula, ubuciko obuhle, ukwakheka kwesitayela semfashini.Sikholelwa ngokuqinile ukuthi "akukho okungcono kakhulu, okungcono kuphela", futhi uphila ngokuvumelana ukukhetha nokwethembela kwezemidlalo yangaphandle